Haleellaa Masjiida NZ'tti raawwateen walqabatee Feesbuukiin tamsaasa kallattii irratti daangaa tolchuuf - BBC News Afaan Oromoo
Hawwaasni Niiwuu Ziilaandii yeroo miira gaddaa keessa jiran
Feesbuukiin tajaajila kallattiidhaan tamsaasuu qoratee murteessuuf waadaa gale. Kunis kan ta'e torban lamaan haleellaa Masjiida Niiwu Ziilaanditti qaqqabeen boodadha.
Qondaalli Ol-aantuu Opereeshinii Sheryl Sandberg akka jedhanitti "dhimma kana irratti caalmaan akka hojjetamuuf" waliif galameera.
Haleellaa kallattiin dhukaasuun Kiraayisticharchiitti raawwatameen namoonni shantamni kan ajjeefaman yommuu ta'u, viidiyoon haleellaa kana agarsiisu osoo hin haqamiin si'a 4,000 daawwatamee ture.
Kun osoo kanaan jiruu, Niiwuu Ziilaaldiin ammoo, seerawwan haasawa jibbinsaa irratti jiran "ga'aa miti" jedhaman keessa deebitee ilaaluuf akka jirtu beeksifteetti.
Ministeerri Haqaa Andrew Little akka jedhanitti, seeronni amma hojiirra jiran "waanta badaafi jibbinsa yeroo ajmmaa nuti toora irraan argaa jirru kana" dura kan dhaabbatan miti. Kanaaf jedhan, mootummaafi Komishiniin Mirgoota Namoomaa yaadawwan furmaataa gara dhuma waggaa kanaa dhiyeessuuf jiru.
Sirna gaggeessaa namoota 50 haleellaan Bitootessa 15 raawwatameen lubbuun darbe irratti namoonni Kiraayistcharch 20,000 ol ta'an hirmaataniiru.
Namoonni 21 ammallee wallaansaaf hospitaala kan jiran yommuu ta'u isaan keessaa sadii haala yaaddessaa keessa jiru.
"Nuti warri Feesbuukii warreen miidhaman, maatii isaanii, hawwaasa Musiliimaafi uummata Niiwuu Ziilaandii waliin ni dhaabbana," jedhanii akka erga dabarsan Aadde Sandberg gaazexaa Niiwuu Ziilaani Herald jedhamu irratti baasaniiru.
"Hedduun keessan yeroodhuma waanti akkasii kun uumame waanti badaafi sodaachisaa akkasii kun maaliif Feesbuukiiidhaan kallattiidhaan darbe jettanii gaafachaa turtan....Nutis yaada keessan dhageenyee caalmaatti hojjechuu akka qabnu irratti waliif galleerra."
Aadde Sandberg kan jette: "Duraan dursinee, dhimmoota akka Sadarkaa Ilaalcha Hawwaasaa Diiguu mala jedhameen ilaallee eenyu akkamiin Feesbuukiidhaan kallattiidhaan tamsaasuu danda'a kan jedhu tooftaa ittiin daangessinu qorachaa jirra."
Paapu'aa Niiw Giiniitti Feesbuukiin baatii tokkoof ugguramuufi
Siidaa Raas Mokonnon Hararitti diigameen warreen shakkaman shorokkeessummaan himataman
Mudaan nootiiwwan Birrii haaraarra jiru dhiibbaa hin qabaatuu?
Namichi gur'aachi daa'ima adii guddifachaan fudhate butteeti jedhame
'Fayyummaankoo naaf deebi'aa jira' - Ali Birraa
23 Fuulbaana 2020
Waa'ee namoota 22 Obbo Jawaar fa'i waliin himataman maal beekna?
'Nageenya waaraa fiduuf hawaasni walitti bu'iinsa diduu qaba'
'Himannaa nurratti banuun filannoo keessaa nu baasuuf jedhameeti'
Yun. Amboo maqaa Haacaaluun sagantaa carraa barnoota tolaa jalqabuufi
20 Fuulbaana 2020
'Naannoo Oromiyaatti namoota 2,000 ol Irratti Himanni banameera'
Obbo Jawaar Mohaammad fa'i mana amala sirreessaatti akka dabarfaman ajajame
Dubartii ulfa abbaa warraashii qurxummii shaarkiin nyaatamuurra hambiste
Hayilasillaaseen akkamiin yaadatamu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 11 Guraandhala 2019
Beenishaangul Gumuzitti haleellaa halkan qaqqabeen namoonni 15 ajjeefaman
Kan isin qabe utaalloo yookaan Covid-19 ta'uu isaa akkamiin adda baafachuu dandeessuu?